ko htike's prosaic collection: ကယ်တင်ရှင် ရှာဖွေမိခြင်း
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ဘာများ ကျန်သေးလဲလို့ ကျွန်တော် တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော် “စ” တွေးမိတာက ..
သာမန် ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ယေဘုံယျ (တရားနည်းလမ်း မှန်မှန် သမာအာဇီဝနဲ့ ရတဲ့) ဝင်ငွေက တရက်ကို အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာ အောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။
ထမင်းရည် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ ဈေးကွက်ကလည်း တော်တော် ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။(သမိုင်းထဲက သာလွန် မင်းတရားကြီး အသက်ရှင်လျက်ရှိရင် ဘာပြောမလဲ မသိ။)
အဲ .. နေ့စဉ် ကြားနေရတဲ့သတင်းတွေကတော့ .. ဘယ်နေရာမှာ လုခံလိုက်ရပြန်ပြီ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဖောက်ထွင်းသွားလို့၊ ... နေ့လည်ခင်းကြီး မြို့လယ်ခေါင်မှာ ရိုက်လုခံရလို့တဲ့။ ကျွန်တော့် မေးလ်ထဲလည်း အဲဒီလို သတင်းတွေ မကြာခဏ ပို့ကြပါတယ်။ တစ်ခုခြင်း အတွက်ဆို သာမန် ဒုစရိုက်မှုလို့ ယူဆလို့ရပေမယ့် အဲလို အမှုတွေ တိုင်းပြည်မှာ နေ့စဉ် လူတိုင်းတွေ့မြင်ခံစားလာရတာကတော့ နိုင်ငံ့အရေး ဖြစ်လာလို့နေပါတယ်။
မေးလ် တစ်စောင်က သူ့ဆရာမ တစ်ယောက် ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ နေ့လည်ခင်း အလုခံရလို့တဲ့၊ နောက် တစ်ယောက်က အိမ်နားက အဘွားကြီး တစ်ယောက်ကို ထုရိုက်ပြီး လုသွားတယ်တဲ့၊ အခြားတစ်ယောက်ကလည်း ရင်းနှီးတဲ့ လူတွေ၊ အချင်းချင်းတွေ ငွေချေးပြီး မထင်ရလောက်အောင် ပြန်မပေးနိုင်ကြတာကို တွေ့ရတယ်တဲ့။ နယ်တွေမှာ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး လုယက်နေကြတယ်တဲ့။ ကျောင်းသူတစ်ယောက် ဒါးထိုးခံရပြီး အလုခံလိုက်ရတယ်တဲ့။
သတင်းတွေပေါ့၊ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့၊ အခြားနိုင်ငံမှာလို စိတ္တဇ လူသတ်သမားတို့၊ ဆေးကြောင်ပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်တာတို့၊ ဘိန်းအရောင်းအဝယ် လုပ်တာတို့ထက် ... ငွေကြေးရလိုမှုကို အခြေခံတဲ့ လုယက်မှုတွေသာ များနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမှုဖြစ်ရာ နေရာတွေ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ မြို့လယ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ (အခြားနေရာတွေက သတင်း မရနိုင်တာကြောင့် အဲဒီနေရာတွေမှာ မဖြစ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။)
ညငှက် မိန်းကလေးတွေ များလာတယ်တဲ့။ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ငွေကြေး ကိစ္စ အခြေခံတာ များနေပါတယ်။ ဟော .. ထိုင်းမှာ တရားဝင်ရော၊ တရားမဝင်ရော မြန်မာ အလုပ်သမား သိန်းချီ ရှိတယ်တဲ့၊ စင်္ကာပူမှလည်း မနည်းပါဘူး။ မလေးရှားမှာ ဒုနဲ့ ဒေး။ အခြား နိုင်ငံတွေမှာလည်း တော်တော်များများ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလူတွေထဲမှာ ၁% လောက်သာ ပညာနဲ့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် အလုပ် လုပ်နေကြရပေမယ့်၊ ကျန်တာကတော့ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေပါ။ အားလုံး ဘာအတွက် အဲလို ဒုက္ခခံနေရတာလဲ ...။ အဖြေက တိုင်းပြည်မှာ စီးပွားရေး အဆင် မပြေလို့ပါတဲ့။
ဒါဆို တိုင်းပြည်ရဲ့ သာမန် လူများစုမှာ စီးပွားပျက်လာတာကို သေချာ မြင်နေရပါပြီ။ တိုင်းပြည်ပျက်ခြင်း အကြောင်းအရင်း နံပါတ် (၁) ပေါ့။
အထူး ပြောနေဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ကိစ္စ။ မြန်မာ့သမိုင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းရဲ့ ဖျက်လို့လုံးဝ မရနိုင်တော့တဲ့ သမိုင်းဝင် အစွန်းအထင်း အမည်းကွက်ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျူးလွန်လိုက်တာပါပဲ။
ဒီနေ့ မနက် ကျွန်တော် တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောတဲ့ ပရိတ်တရားတော်ကို အင်တာနက်မှာဖွင့်ပြီး နာကြားမိတော့ .. ဆရာတော် ဘုရားကြီး ခွေထဲမှာ ..“မြန်မာပြည်သည် ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားသော နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗါန် စံတော်မူပြီးသည့်နောက် သီဟိုဠ်ခေတ်မှ စ၍ သာသနာ အစဉ်အဆက် ထွန်းကားလာသော တိုင်းပြည်နိုင်ငံများတွင် မြန်မာပြည်သည် အထွန်းကားဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ အထွန်းကားဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့် ပရိယတ္တိ သာသနာသည် ခိုင်ခိုင်ခံခံ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုံလုံလောက်လောက် ယနေ့တိုင်အောင် တည်တန့်နေသော တိုင်းပြည်ကို ရှာသောအခါ မြန်မာပြည်သည် အထင်ရှားဆုံးသော တိုင်းပြည်ဖြစ်ခဲ့။ ထို့အတူ ပရိယတ္တိ ထွန်းကားသလို ပရိပတ္တိ သာသနာထွန်းကားသော နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်။ ” တဲ့။
ကဲ .. အခု လက်ရှိ ထေရ်ကြီး ဝါကြီး ဆရာတော်ကြီးတွေထဲက တစ်ပါးတလေဆီက အဲဒီလို မိန့်ကြားသံမျိုး ကြားရနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သံဃာတော်တွေကို လူသိရှင်ကြား အားလုံးအသိ၊ တကမ္ဘာလုံး အသိ ရိုက်နှက် သတ်ခဲ့လို့ အခြား ဘာသာတွေ သက်သာမယ်လို့ တွေးထင်လို့ မရ။ သက်သေ သက္ကာယ ပြည့်စုံစွာနဲ့ ဖိနှိပ်ခဲ့တာတွေ တိကျစွာ ရှိပါတယ်။
ဘာသာရေး ပျက်စီးမှတော့ ဘာသာရေးတွေက သင်ကြားပေးတဲ့ အခြေခံ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ဘယ်နားမှာ အစ အန သွားရှာရပါ့။ တိုင်းပြည်မှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ လက်နက်ပြ ဒမြဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်က တိုင်းပြည်အကြီးအကဲဆိုပြီးလုပ်၊ လူသားဆန်ဆန် ကတိစကားဆိုတာကို မေ့ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ရူးသလိုလို၊ ကြောင်သလိုလိုနဲ့ တရားမဝင်သလိုလုပ်၊.... နောက်လိုက်တွေက အမဲရိုးလောက်စားရတာနဲ့ အမြီးလေး တနံ့နံ့နဲ့ တွေ့သမျှလူကောင်းတွေကို လိုက်ကိုက် လိုက်ဟောင်...။ (သတင်းစာမှာ ဟောင်လိုက်၊ ကြံဖွတ်လို ခွေးဝဲစားက လူကို လိုက်ကိုက်လိုက်နဲ့ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။) ကိုယ့်ကျင့်တရားပျက်တာ ပြောပါတယ်။
ဒါဆို တိုင်းပြည်မှာ ထွန်းကားနေတဲ့ ဘာသာရေးတွေ ပျက်စီးကုန်ပြီး အမည်ခံ ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှုလောက်သာ ကျန်တော့ကို မြင်နေရပါတယ်။ တိုင်းပြည်ပျက်ခြင်း အကြောင်းအရင်း နံပါတ် (၂) ပေါ့။
“ဥပဒေ အထက် ဘယ်သူမှ မရှိရဘူး” တဲ့။ ငယ်ငယ်က ကလေးတွေ ပြောသလို ပြောရရင် “အပြောကတော့ ရွှေမန်းပဲ” ... ။ ဇာတ်မင်းသားကြီး အင်္လကာ ကျော်စွာ ရွှေမန်းနဲ့ အခုလို လူမျိုးတွေနဲ့ နှိုင်းရတာ တော်တော်လေးတော့ မပြောသင့် မပြောအပ်တဲ့ စကားလို့ အင်္လကာ ကျော်စွာ ရွှေမန်းဘက်က နာပြီး အပြစ်တင်ချင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။ အက အလွန်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်မင်းသားကြီးလို လေသံလေးက ကောင်းမွန်လှပြီး တကယ် “က” တော့မှ ပေါက်ကရ အကသာ “က” နိုင်တယ်။ အပြောတခြား အလုပ် တခြား(တခြားဆိုတာထက် အခု ဒီကောင်တွေ လုပ်ရပ်က အပြောတမျိုး အလုပ်က ဆန့်ကျင်ဘက်။) ဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့ စကားမို့ သုံးလိုက်ရတာပါ။ ပြောသူကလည်း ရွှေမန်းဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လူ ဖြစ်နေတာကိုး။
ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းလိုက်တာများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စလို့ အခု နောက်ဆုံးတရားရုံးမှာ အမှု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူတွေအထိ။ အားလုံး သိပြီး ဖြစ်တဲ့ အတိုင်း အစ ကတည်းက မဖမ်းသင့်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူတို့ ကျင့်သုံးနေတဲ့တရားဥပဒေကို လွန်ပြီး ၅ နှစ်ကျော်အောင် ဖမ်းထားကတည်းက ဥပဒေဆိုတာ မလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့ သက်သေ ပြယုဒ် တစ်ခုပါပဲ။
မန္တလေးမှာ သံလက်သီးနဲ့ ထိုးခံရလို့ မျက်စိကွယ်မလို ဖြစ်နေတဲ့ ဦးသန်းလွင်က ထောင်ကျနေပြီး၊ အမှုကျူးလွန်သူ ကြံဖွတ်တွေကတော့ အပြင်မှာ ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းနေတာ အားလုံး အသိပါပဲ။ ဘယ်မှာလဲတရားဥပဒေ။
အခု နောက်ဆုံး တရားရေးရာ ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေတွေကို ဖမ်းနေပြန်ပါပြီတဲ့။ အောက်က သတင်းမှာ အပြည့်အစုံဖတ်ကြည့်ပါ။
နိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈
(မိုးမခ မှ ရယူပါသည်။)
ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန် (တိုက်ပုံအင်္ကျီအညိုဖြင့် ထိုင်နေသူ)
ရှေ့နေ ဦးမြတ်သောင်း၊ ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးကြည်ဝင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအတွက် အကျိုးဆောင်လျက်ရှိသော ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးခင်မောင်ရှိန် တို့ကို မျက်ကွယ်ထောင်ဒဏ် ၄ လ ချမှတ်လိုက်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ အထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ဇာဂနာကဲ့သို့ ထင်ရှားသူများ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ရဟန်းသံဃာများဘက်မှ အကျိုးဆောင်နေသည့် ရှေ့နေများဖြစ်သည်။ ဦးအောင်သိန်းက လာရောက်ဖမ်းဆီးမည်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း၊ အကျဉ်းသားဝတ်စုံပြာ၊ သုံးစွဲနေရသည့် သွေးကျဆေး တို့ကိုလည်း အသင့်ပြင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အေပီသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားလိုက်သည်။ ဦးအောင်သိန်း၏ဇနီးသည် ဒေါ်မိမိ (Mi Mi)က "ဦးအောင်သိန်း အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေအတွက် ပိုပြီး စိုးရိမ်မိတယ်၊ သူတို့အမှုတွေ ရှေ့နေမရှိဘဲ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲမသိဘူး" ဟု အေပီသို့ ပြောပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက အကျဉ်းသား ၁၁ ဦးကို အကျိုးဆောင်ပေးနေသူ ရှေ့နေ ကိုညီညီထွေး ထောင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ (ဓာတ်ပုံ - မိုးမခ၊ ၂၀၀၈ မတ်လ)
ဒါဆို တရားဥပဒေဆိုတာလည်း တိုင်းပြည်မှာ ပျက်နေတာကို မြင်နေရပါပြီ။ တိုင်းပြည်ပျက်ခြင်း အကြောင်းတရား (၃) ပေါ့။
အခြား အချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုတာကလည်း သန်းရွှေကိုယ်တိုင် စင်္ကာပူ ဆေးသွားကုခဲ့တာ၊ သူ့မြေးနဲ့ သမီးကို နိုင်ငံခြားမှာ စာသွားသင်ခိုင်းတာ၊ အဲဒါကို ကြည့်ကတည်းက ဘယ်လောက် နိမ့်ကျနေသလဲဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံနေတာ သေချာပါတယ်။ (အသေးစိပ် အချက်အလက်တွေ ပြောရရင် ကုန်နိုင်ဖွယ် မရှိ၊ စာအရမ်းရှည်နေမှာ စိုးလို့ ဒီ ၂ ချက်ကို တိုတိုပဲ ရေးလိုက်တာပါ။)
ကျန်းမာရေး ပညာရေး ပျက်စီးနေတာလည်း မြင်နေရပါပြီ။ တိုင်းပြည် ပျက်စီးခြင်း အချက်တွေပါပဲ။
တိုင်းပြည်မှာ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ တရားဥပဒေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေ ပျက်နေမှတော့ ... အဲဒီ တိုင်းပြည်အနာဂါတ် ဘယ်လိုများ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဦးမယ် ဆိုပဲ။ အခု လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေကို သေချာမပြင်နိုင်ပဲ၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဇွတ် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတာကတော့ ... ရလဒ်ကောင်း ဖြစ်လာဖို့ မမြင်ပါ။
ဒီတော့ ကျွန်တော့်တို့တတွေ ကိုယ့်လက်ပေါ် ဖယောင်းစက် မကျသေးလို့ မပူသေးဘူး ပြောသလို ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ မငတ်သေးလို့ တိုင်းပြည်ကြီး ဘာမှ မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ မျက်စိမှိတ်ပြောကြမလား ... တိုင်းပြည်အနာဂါတ်နဲ့ နောင်မျိုးဆက်တွေက “ငါတို့ထက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေ ဖျက်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ငါတို့ လူလာ ဖြစ်ရလေခြင်း” လို့ ဆိုပြီး ယူကျုံးမရ ပြောပြီး အပြစ်တင်တာကို ခံမလားဆိုတာက ... မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး ဖြေရမယ့် အဖြေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖ သတင်းစာတွေထဲက ပြောလေ့ရှိတဲ့ အတိုင်း အခုဆို တိုင်းပြည်ခြောက်ထဲရောက်ဖို့ လက်မတင်ပဲ လိုပါတော့တယ်။ ကဲ .. ဘယ်သူတွေ ကယ်ကြဦးမှာပါလဲ။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ ကယ်မှာလား
၂၀၀၇ မျိုးဆက်တွေ ကယ်မှာလား
အနောက်နိုင်ငံတွေက ကယ်မှာလား ...
ဘယ်သူ ကယ်မှာပါလဲ ......။
ကျွန်တော် မြင်တဲ့ အဖြေကတော့ တိုင်းပြည်ကို ကယ်မဲ့လူကတော့ “သင်” ကိုယ်တိုင်ပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်။
“သင့်” ကို တိုင်းပြည်မှ ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် အလိုရှိနေပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 23:28
Mon Capricorn said...
What if every Myanmar haveachance to read articles like this.
Perfect writing, Ko Htike...
And what if somebody can distribute this article as leaflets in Myanmar...
Thanks, Ko Htike..
9 November 2008 at 01:25
Whatanice post and all burmese people should read it.
Thank you, ko htike.
9 November 2008 at 09:19
We do have still choice yet. Shall we? Of course not.
4 April 2009 at 18:25